Amaphupho ngesikole – iAfrika
Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oya kuwo. Njengoba amaphupho enezincazelo ezahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi kumele uthwase.
Tags Amanyuvesi, Izikole
15 thoughts on “Amaphupho ngesikole”
Kuphupha muntu longamati akutjel ukuthi kumele uyothwasa emanzini kushoni
Ngicela ukubuza uma uphupha useskoleni ebese uxabana nimfundi, umukinye afe kuchazani?
Sanibonani ngihlezi ngiphupha ngiseskoleni ngenza u matric noma grade 10 ngibatshele e classini kuty sengaqeda iskole Manje angazi ukuthi kuchazani ngicela ningisiza ngencazelo
31/03/2021 at 07:48
Bengiphuma ekhaya, ngiphuma ngaphandle ngabona umuntu edweba (painting) isithombe esihle sengane igqoke amaphijama.Nami ngadweba esami isithombe esihle isendaweni engathi iseMakhaya.
Hi ngincela ukubuza ukuphupha ugqoke umfanekiso wesikolele funds ibanga umatikuletsheni kusho ukuthini
01/04/2021 at 07:19
Kuchaza ukuthi kumele uyothwasa
04/02/2021 at 22:36
Ngicelukubuza ngiphupha ugogo efunitiye ehlelinamakhehla nabanyegogo engingabazi
12/02/2021 at 13:23
Cofa lapha ukuthola incazelo https://iafrika.org/amaphupho-ngekhehla-noma-isalukwazi/
Slindokuhle Charity Ngcobo
Ngphuphe ngihamba phezu kwebridge ngaphansi kunolwandle elinamanzi aClean agubhuza kancane nje kahle .. qede lapho ngahamba ngaphinda emuva ngahamba ngihlangana nezingane engingazazi nengifunda nazo manje ngazidlula ngahamba ngaya eskoleni nakhona ngafica ezinye ingane engingazazi ezinye ngyazazi!.. engabe liqondeni
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngamanzi/ kanye https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/
20/03/2021 at 10:14
Mele uyothwasa unabantu abadala
31/12/2020 at 07:36
Mina ngiqale ngaphupha engathi ngihamba abridgen ngaphansi kukhona ulwandle olushe olugubha amagagasi amancane nje luClean .. qede ngazibona ngihamba ngphind’ emuva ngabona abantu engfunda nabo vele nabanye engabazi ngabadlula ngayeskoleni ngafica abanye engbaziyo abanye ngingabazi.. engabe liqondeni..
28/10/2019 at 21:21
Am ntoko ngicela ukubuza uma uphupha useskoleni eklasini ugqoke umfaniswano kuduke izincwadi zakho kusho ukuthini liyangihlupha leliphupho
29/10/2019 at 08:38
Nazi ezinye izincazelo mayelana nesikole, bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngemfundo/ nalapha futhi: https://iafrika.org/amaphupho-ngezincwadi/